Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Madiina - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Medina (Carabi: المدينة Madiinah) waa magaalo ku taal Sacuudi Carabiya, waqooyiga Maka.
Muuqaalka Madiina ee 2008, oo ay la socoto Al-Masjid al-Nabawi (Masjidka Nabiga) oo ku yaal wejiga hore
Madiina waa magaalada labaad ee barakaysan ee Islaamka. Nebi Muxammad wuxuu uga haajiray Madiina Maka, wuxuuna halkaas wax ku baray sanado ka hor intuusan guul ku laabanin Maka. Magaalada waxaa inta badan la booqdaa iyada oo qayb ka ah xajka Virtual ee Xajmiga 29, 2020.
Fiiro gaar ah: Dadka aan Muslimka ahayn waa si adag loo mamnuucay laga soo galo bartamaha Madiina. The ugu yaraan ciqaabtu waa masaafurin dalka. Warqadaha doono waa la hubin doonaa marka aad soo gasho oo qofkii aan muujin caddayn inuu yahay Muslim waa loo diidi doonaa inuu soo galo. Si kastaba ha noqotee, qaybo badan oo magaalada ka mid ah, gaar ahaan duleedka iyo Madaarka Madiina, waa u furan dhammaan.
Xujaajta, marinka ugu caansan waa in ay Jeddah ku yimaadaan diyaarad, oo ay raacaan basaska xujeyda qaaska ah ee tagaya Maka iyo Madiina, oo ay ku soo noqdaan si ay ugu duulaan guryahooda toddobaadyo gudahood
Madaarka Amiir Mohammad Bin Abdulaziz. Garoonkan waxaa ku soo badanaya duulimaadyo toos ah oo ka imanaya Bariga Dhexe, garoonka diyaaradahana waa u furan yihiin dadka aan Muslimka ahayn. Maskaxda ku hay in tani ay tahay garoon diyaaradeed oo aad u yar, oo aan runtii loogu talagalin inay la qabsato tirooyinka tirada badan ee hadda maraya. Marka ka filo burburin ka soo baxda alaabada. Oo filo in bilaash loo wada helo meelaha baaritaanka, halkaasoo safafku u muuqdaan (macno ahaan) fikrad shisheeye. Sidoo kale, ka digtoonow kuwa wax khiyaameeya (ka eeg “Meeshaada nabad gal”).
Shirkadda Gaadiidka Dadweynaha ee Sacuudi Carabiya (SAPTCO) waxay basaska raaxada leh dhowr jeer maalin walba ku qaadataa kana soo qaaddaa inta badan dalka oo qiime jaban. Waxa kale oo jira basas si gaar ah loo maamulo. Terminal-ka SAPTCO waa laga mamnuucay dadka aan Muslimka ahayn.
Khad tareen xawaare sare leh oo isku xiraya Madiina iyo Jeddah iyo Mecca ayaa la furay bishii Sebtembar 2018 iyadoo adeegyaduna yihiin 8 adeeg maalintii. Ku Xarunta tareenka ee Madiina waa bariga Xarunta, oo ku teedsan Wadada King Abdul Aziz.
Ma jiro gaadiid dadweyne oo aan ka ahayn tagaasida. Haddii aad ku jirto wadada dhinaceeda, waxaad arki kartaa dadka deegaanka oo doonaya inay ku kaxeeyaan oo kuu qaadaan meesha aad u socoto lacag, inkasta oo aysan si rasmi ah u ahayn taksi, laakiin iska jir fanaaniinta ka soo jeeda labada taksi ee rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn. wadayaasha (fiiri “Badbaado Sug” hoosta).
Guryo isdabajoog ah oo loogu talagalay Barxadda Boqorka Fahad ee Kordhinta Al-Masjid al-Nabawi.
Al-Masjid an-Nabawi (Masjidka Nabiga). Maaddaama ay booqdaan kaliya Muslimiinta, ujeedooyin diimeed, waxa ugu weyn ee la arko waa Masjidka Nabawi ama Masjidka Nabiga oo ay ku tukadaan muslimiin cibaado badan. Ragga ayaa loo oggol yahay inay booqdaan goobta dhabta ah ee lagu aasay Nabiga oo ay xushmeeyaan dhammaan saacadaha uu furan yahay masjidka, kaasoo xirnaan jiray habeenkii saacaddu markay ahayd 10PM laakiin tan iyo markii uu noqday 24/7. Dumarku waxay booqan karaan oo keliya marka laga yimaado Fajarka ama waaberiga iyo Duhur ama salaadda casar, marka halkaas loo geeyo iyaga oo koox koox ah sida ku xusan dalalkooda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Jannatul Baqi. Run ahaantii inta badan waxyaabaha la qabanayo ama la arkayo waxay ku xeeran yihiin masaajidkan weyn ee ku yaal Bartamaha magaalada. Waxaa ku dhegan masaajidka Jannatul Baqi, oo ah xabaalo aad u weyn, halkaas oo ay ku aasan yihiin inta badan xubnaha qoyska iyo saxaabadii Rasuulka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Al Madina ee Xarunta Tareenka ee Al Hejaz, Wadada Cumar Ibnu Alkhtab. Matxafkan ayaa ka mid ah goobaha aan diinta ku jirin ee Madiina, waxaa ku yaal xaruntii hore ee terminus Tareenka Hejaz wuxuuna soo bandhigayaa taariikhda Madiina laga soo bilaabo taariikhda hore iyo tan casriga. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Buurta Uxud. Waxyaabaha kale ee la arki doono, in yar oo magaalada ka durugsan, waa bannaanka iyo buurta Uxud ee uu dagaalku ka dhacay. Waxa kale oo jira goob lagu aasay 70 ka shahiiday ee dagaalkan oo uu ku jiro nebiga adeerkiis Xamza oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay shuhadada ugu waawayn abid. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajida (Masaajidda). Meel u dhow waxaa ku yaal dhowr masaajid oo caan ah (masaajido) oo la booqan karo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjid Qiblatayen. Waxaa sii dheer Masjidka Qiblatayeyn oo Quraanka kariimku ka sheekeeyay in Nabiga uu Allah faray inuu wejigiisa ka jeediyo Qudus una tago Kacbada Makka isagoo salaada tukanaya. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjid Jumua, Buraydah. Masjid Jumua oo ah meeshii nebigu ku tukaday salaada Jumua ama jimcaha koowaad. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjid Al Ghamamah. Masjid Gamama halkaasoo uu mar ku tukaday roob doon. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjid Quba, Quba. Masjidka Quba ee Quba, oo ah masaajidka ugu horreeya ee Islaamka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Meel kale oo mudan in la booqdo waa goobta dagaalka ee Khandaq ama Trench.
Aragtida dadka lugeynaya ee dalladaha dib looga noqon karo ee bixiya hooska xujaajta fagaaraha Al-Masjid al-Nabawi
Booqo masaajidka weyn, Masjid Al-Nabawi. Nebi Muxamed meeshii uu ku aasay ayaa ku dhex yaal masaajidka
Wadooyinka soo gala iyo hareeraha Masaajidka Nebiga waxaa hareeyay dukaamo lagu iibiyo alaabo noocyo kala duwan leh. Dadka soo booqda Madiina waxay inta badan iibsadaan roogaga salaada (qaar waxay leeyihiin magnets oo u jeeda Kacbada), koofiyado, Tasveeh ama tusbaxyada tusbaxyada, Abayas, sawirada magaalada barakeysan iyo masaajidyada, CD-yada diinta, nuqulada Qur'aanka Kariimka ah, saacadaha ka dhawaajinaya Azan ama baaqa loo dirayo. salaadda (saxda ah tan labaad) ku dhowaad 5 milyan oo magaalo, iwm. xusuusyo ay dib ula soo noqon karaan ama hadiyado ahaan qoysaska iyo asxaabta. Kuwa ugu wanaagsan ee ay dib ula soo noqon karaan waa Taariikhaha ka timaada Madiina.
Waxa kale oo jira dhismooyin dukaamo oo aad u dhalaalaya iyo suuqyo lagu iibiyo badeecadaha adduunka oo idil.
Kaararka amaahdu badanaa lama aqbali karo, bangiyada yarna way isweydaarsan doonaan jeegagga socotada.
Waxaa jira makhaayado ku iibiya ku dhowaad dhammaan noocyada cuntada Xalaasha ah ee ka kala yimid adduunka oo idil. Waxaa jira maqaayado Hindi, Baakistaan ​​iyo Bangaladesh oo aad u tiro badan. Waxa kale oo jira cunnooyin Xalaal Shiineys ah, Indooniisiya, Turki, Masaari, iyo raashin maxalli ah.
Silsiladaha caanka ah ee reer galbeedka ee sida dhakhsaha badan loo cuno ee loo yaqaan 'Halal silsilado' sida McDonald's, Pizza Hut, Don Giovanni's iyo KFC dhammaantood waxay leeyihiin goobo lagu iibiyo, sidoo kale silsilado Sacuudi ah sida Al Baik, Kudu iyo Hardeez. Takhasusyada ugu jaban ee maxalliga ah waa shawarma, taamiyya (nooc ka mid ah sandwich-ka khudradda), xumaanta (digirta la kariyey) oo leh roodhi, roodhida digaagga oo dhan la dubay oo la yiraahdo Broasts.
Xagee laga joogaa Madiina
Timir miro leh oo ku taal Madiina
Madiina waxay leedahay hudheelo badan oo badankood aad ugu dhow masjidka. Huteello tiro badan oo 5 xiddigle ah ayaa laga dhisay oo laga dhisayaa hareeraha masaajidka Nebiga dhexdiisa meel u jirta 500 m. Waxa intaas dhaafsiisan waa hudheelo miisaaniyadeed oo badan oo masaafo ka fog Masjidka Nabavi. Tacriifadu waxay kuxirantahay masaafada hudheelku masaajidka udhawyahay, ta ugu dhaw ayaa ka qaalisan. Xitaa hudheeladan qiimaha jaban waxay leeyihiin xarumo sida sariiraha saxda ah ee gogosha nadiifka ah, sagxadaha sariirta, qaboojiyaha, qaboojiyaha qol kasta, musqulaha dusha sare leh ee lagu rakibay noocyada bari ama galbeed WCs (mararka qaarkood labadaba), 24 saacadood oo socda biyo kulul iyo qabow. Jikada ay ku jiraan LPG iyo waxyaabaha lagu gubo iyo saxamada ayaa sidoo kale loo heli karaa kuwa xujeyda ah ee jeclaan lahaa inay karsadaan cuntadooda. Laakiin hadda dhammaan hudheeladan yar-yar ee duugga ah ayaa si ballaadhan loo duminayaa si loogu banneeyo hudheelada caanka ah.
Hoteelada soosocda waxaa leh muslimiinta oo kaliya.
Al-Majeedi Arac Suites, Aagga Waqooyiga Dhexe. Waxay bixisaa guryo waasac ah oo hawo qaboojiye ah, oo dhammaantood leh taleefan, telefishanka telefishanka, iyo musqul gaar ah iyo musqul qubays leh. Qaar ka mid ah adeegyadeeda waa sarrifka lacagta, nadiifinta qalalan / dharka, iyo sanduuqyada dhigaalka ee aaminka ah. Intaad halkan joogtid waxaad booqan kartaa goobo dalxiis sida Masjid Al Nabawi, Masjidka Qiblatayn, iyo Masjid Musallah. Qiimaha ugu wanaagsan ee bogga rasmiga ah wuxuu ka bilaabmaa SAR 400.
Taiba Arac Suites, Aagga Waqooyiga Dhexe. Waxay bixisaa qolal hawo-qaboojiye ah oo si habboon ugu faanaya musqul gaar loo leeyahay oo leh qubeys iyo qubeys, telefishanka telefishanka, iyo taleefan. Qaar ka mid ah adeegyadeeda waa sarrifka lacagta, nadiifinta qalalan / dharka, iyo sanduuqyada dhigaalka ee aaminka ah. Intaad halkaan joogto waxaad booqan kartaa goobo dalxiis sida Masjid Al Nabawi Al Sharief, Masjidka Qibalatin, iyo Baqi 'Al-Gharqad. Qiimaha ugu wanaagsan ee bogga rasmiga ah wuxuu ka bilaabmaa SAR 2300.00.
Hotel Pullman Zamzam Madina, Wadada Amr Bin Al Gmoh. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Madiino Hilton, Wadada King Fahad. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Oberoi ayaa, Madina (فندق اوبروي المدينة المنورة x), 1880, Wadada Abizar. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Madina Al Rowda Suites
Isku xidhka Dar Al Hijra
Hotelka Anwar Al Madiinah
Bannaanka bartamaha magaalada
Hoteelada soosocda way u furanyihiin dhamaan.
Le Méridien Madiina. Markii hore Sheraton, kani waa huteelka kaliya ee summadaysan ee Madiina u furan dadka aan Muslimka ahayn. Waxay ku dhowdahay garoonka diyaaradaha waxaana badanaa isticmaala shaqaalaha diyaaradda. Qiyaastii 600 riyaal habeenkii.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Madiina
Dad badan oo soo booqda waxay u maleynayaan in maadaama Madiina ay tahay magaalo barakaysan, aysan u baahnayn inay ka baqaan in loola dhaqmo si aan daacad ahayn Nasiib darro, taasi maahan male ammaan ah. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah khiyaanooyinka laga taxaddarayo:
Markaad ka tagto aagga amni ee garoonka diyaaradaha Madiina oo aad gasho hoolka imaatinka, haddii aad u muuqato soo booqde wanaagsan oo ka yimid waddan hodan ah, waxaa kuu imaan doona nin kalsooni badan oo hadal wanaagsan oo doonaya inuu arko baasaboorkaaga. Qofkani maahan garoon diyaaradeed ama sarkaal dowladeed, laakiin dhab ahaantii wuxuu u shaqeeyaa shirkad taksi oo maxalli ah waana inaad dalbataa inaad aragto aqoonsi haddii qofna uu ku codsado baasaboorkaaga. Haddii aad siiso baasaboorkaaga, ka dib wuxuu kaa codsan doonaa inaad raacdo miis halkaas oo loogu dhiibo qof iska dhigaya inuu si taxaddar leh u baarayo in muddo ah ka dibna kuu sheegi doona inaad raacdo mid ka mid ah asxaabtiisa meesha darajada tagaasida halkaas oo hubaal lagaa rabo in si qarsoodi ah lagagaga qaado safarka aad ugu jirto bartamaha Medina Waxaa jira qiimayaal go'an oo loogu talagay safarada tagaasida aada garoonka diyaaradaha ilaa bartamaha Madiina, sida ay dajisay dowlada, kuwanna waxaa lagu qori doonaa calaamadaha aaga gaariga la dhigto. Yaan lagugu khiyaanayn inaad bixiso wax ka badan waxyaabaha kugu soo dhacay.
Iska jir darawallada tagaasida - mid rasmi ah iyo mid aan rasmi ahaynba - oo kuu iibinaya sheeko murugo leh oo ku saabsan dhibaatooyinka waaweyn ee guriga ka jira, ama xitaa haddii aad dhahdo waxay u socdaan inay la dagaallamaan Jihaadka Falastiin, Chechnya, Burma iwm, waxayna ku weydiin doonaan tabarucaad. Kuwani had iyo jeer waa been loo qorsheeyay in lacag lagaa dhigo, maxaa yeelay waxay og yihiin inay xujeydu dareemayaan sadaqo mana weydiin doonaan beenta. Weligaa ha ku dhicin khiyaanadan.
Iska jir, maadaama dukaamada iyo dukaamada qaarkood ay si aan xishood lahayn kuugu beddeli doonaan adiga sida ay ogyihiin in yar oo dad ah ay ogaan doonaan waana lacag fudud oo loogu talagalay ganacsiyada damiir laawayaasha ah. Marka haddii aad ka timid meel aad ku kalsoon tahay dukaamada si ay daacad u noqdaan markaa waxaad u baahan tahay inaad ka sii liidato intaad Madiina joogto. Xaqiiji qiimaha intaadan wareejin lacagta ka dibna laba-hubi isbedelkaaga. Haddii aad hesho wax kayar wixii lagaa doonayay, ku adkow inaad weydiisato isbedelka saxda ah. Kadib waxay ku siin doonaan isbeddelka saxda ah cabasho la'aan maadaama ay jiraan ciqaab daran oo xatooyo ah, taas oo asal ahaan ah waxa dadka isbeddelada gaaban ay u dhigmaan.
Mecca waa magaalada kale ee barakaysan ee ay booqdaan dadka kaqeybgalaya Cumrada (xajka yar) ama Xajka Virtual July 29, 2020. Waad kireysan kartaa taksi kaa kaxeeya Mecca, taas oo ku kacaysa ilaa 500 SAR illaa afar rakaab ah. Qaab aad uga jaban oo lagu tago halkaas waa in la isticmaalo adeegyada basaska SAPTCO (Shirkadda Gaadiidka Dadweynaha ee Saudi Arabia) beddelkeeda. Waxaa jira laba nooc: joogto ah iyo VIP. Adeegga caadiga ahi waa mid macquul ah oo qiimahiisu qaali yahay 55 qofkiiba. Nooca VIP-da (oo aad ka soo qaadan karto hudheelka Crowne Plaza) waa waxoogaa raaxo badan oo qofkiiba ku kacaya 100 SAR.
Hotel Harmony Al Madinah
Dar Al Hijra Intercontinental Hotel Madiino
Dar Al Imaan InterContinental Hotel Madina
Hoteelka Oberoi Medina
eHalal Safarka Mart > Safarka Islaamka ee Sacuudiga > Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Madiina
Hagaha Socdaalka ee Fethiye Xalaal